May Nyane: June 2008
နောက်ကျ မွေးနေ့ အမှတ်တရ
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေတုန်းက ဆူဆူညံညံ ပူပူလောင်လောင်နိုင်လှတဲ့ မြို့တော်ကြီးတခုထဲမှာ ကျမ ပိတ်မိနေခဲ့ တယ်။ အင်တာနက်ကဖေးက မြန်မာဖောင့်မရှိ။ ကိုယ့် Laptop လေး သုံးမယ်လို့ ခွင့်တောင်းဖို့လည်း ဘာသာစကားပြဿနာကြောင့် အဆင်မပြေ။ ဒီလိုနဲ့ ကျမ အားခဲထားခဲ့တဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းမွေးနေ့ ၂၁ရက်နေ့ မှာ......... မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးမှ မရေးနိုင်ခဲ့။ သူ့ Blog က စီဗုံးမှာပဲ ဘိုလို ဆုဝင်တောင်း ပေးရုံသာ တတ်နိုင်ခဲ့။ အဲလိုပဲ ၁၉ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ချစ်တဲ့ အန်တီစုရဲ့ ၆၃နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အတွက်လည်း အမှတ်တရ post လေးမှမတင်နိုင်ခဲ့။
သူကတော့ ကျမမွေးနေ့ကျမယ့် ဇွန်၁၄ရက်မှာ ဦးဦးဖျားဖျားဆုတောင်းဖို့ ၁၃ရက်နေ့ည ၁၂နာရီကျော်ထိ စောင့်ပြီး သူ့ Blog မှာ ကျမအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်း post တင်ခဲ့တာ။ ခုတော့ ကျမရဲ့ နေရပ်ကို ပြန်ရောက်ပြီ။ သူ့အတွက် တကယ်တမ်း နောက်ကျနေပေမဲ့ (သိပ်ကြီးနောက်မကျသေးတဲ့ :P ) မွေးနေ့ ဆုတောင်းကို ရေးနိုင်ပြီပေါ့။
သူက ကျမထက် တပတ်တိတိ ငယ်တဲ့အတွက် ကျမက အမြဲ အစ်မကြီးလုပ်လေ့ရှိပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ ကျမမှာ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပြဿနာရှိတိုင်း အရာရာ ဘာလေးမဆို သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှသာ ဆုံးဖြတ်နိုင်တာပါ။ ပြီးတော့ ကျမထက် သူက တပတ်တည်းသာ ငယ်ပေမဲ့ တော်တော် ငယ်တယ်လို့ ထင်ရတာ (အဲလို လူတော်တော် များများက ပြောကြတယ်.. အဲဒီအခါကျရင် သူက သွားကြီးဖြီးပြီး တဟဲဟဲနဲ့ပေါ့.. ကျမက မျက်စောင်း တထိုးထိုးနဲ့ပေါ့ :D )
သူ့မှာရှိတဲ့ ကျမအကြိုက်ဆုံး သဘောအကျဆုံး အတုယူရတဲ့ အချက်က မဟုတ်မမှန်တာကို နည်းနည်းမှ လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်တာပဲ။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးမှာပေါ့..။ ပြီးတော့ အဲဒါကို ကာယကံရှင်ကို ပြောင် ပြောပြီး ထောက်ပြတာပဲ။ (ကျမကကျတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘူး။ မဟုတ်တာလုပ်ရင် အဲဒီလူကို အထင်သေးပြီး အဆက်အဆံ မလုပ်တော့တာ၊ ပြီးတော့ အဲဒီလူမဟုတ်တာလုပ်ကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင်သိအောင် ပြောတာ.. ဟီးး ဆိုးတယ်နော်..) တကယ်တော့ သူ့လိုလုပ်တာကသာ အပြုသဘောဆောင်တာပါ။ ဟဲဟဲ.. စွာတာကတော့ နှစ်ယောက်စလုံး လက်ရည်တူ..။ သူကတော့ ကျမက သူ့ထက်စာရင် ပျော့ပြောင်းတယ် ဆိုပဲ..။ သူကတော့ ပါးစပ်ဆိုးတယ်ဆိုပါတော့.. ဒါဆို ကျမကတော့ ပျော့ပျော့လေးနဲ့ တွယ်တဲ့ သူ.. ခိခိ။
တကယ်တမ်းကျတော့.. သူက လက်တွေ့ကျသူ.. ကျမက စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သူ..။ သူက ခိုင်မာပြတ်သားသူ.. ကျမက တွေဝေပျော့ညံ့သူ..။ သူက စွန့်လွှတ်စွန့်စားရဲသူ.. ကျမက တုန်လှုပ်ပူပန်တတ်သူ။ ကိုယ့်ငါးချဉ်က တကယ်ချဉ်တာပါနော်.. :) ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ကျမတို့နှစ်ယောက် ချစ်ခဲ့ကြတာ ကြာပြီ။ ခုချိန်ထိ တရံတဆစ် တောင် စိတ်အခန့်မသင့် မဖြစ်ဖူး..။ တခုခု ကွဲလွဲရင် ဖွင့်ပြောကြတာမို့ ဘာ အခုအတေးမှ မရှိ။ ကျမတို့ မိသားစု နှစ်စု အိမ်သေးသေးလေးထဲ တစ်လလောက်တူတူနေခဲ့တဲ့ ရက်တွေတုန်းကများ ပျော်စရာ ကောင်းလိုက်တာ..။
ဘ၀ထဲမှာ ခြေကုန်လက်ပမ်းကျစရာကြုံရတဲ့အခါ.. တချို့ကိစ္စတွေက ကိုယ့် ခင်ပွန်းကိုလည်း ပြောလို့မရ.. သားသမီးကိုလည်း ပြောလို့မရ.. အမိအဘ ညီအကို မောင်နှမတွေကိုလည်း ပြောလို့မရ..။ အဲဒီအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ်နဲ့ ထပ်တူ ခံစားနားထောင်ပြီး အကြံပေးတတ်တဲ့.. တကယ်ဖြူစင်တဲ့မေတ္တာ ကိုယ့်အပေါ်ထားတဲ့.. တကယ် စေတနာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက် ရှိနေတာ... ဘယ်လောက် စိတ်အားရှိစရာကောင်းလိုက်လဲ..။ ကျမ အတွက်တော့ ဒါဟာ ဘုရားပေးတဲ့ လက်ဆောင်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ အဲဒါ သူပေါ့..။ သူ့ကို လူတွေက ချစ်စနိုးနဲ့ 'တရုတ်မ'လို့ ခေါ်ကြတယ်။ အဲဒီ တရုတ်မကြီးက မြန်မာပြည်ကို မြန်မာလူမျိုးကို ချစ်တာတော့ ဗမာမ ကျမထက် အများကြီးပိုသာ..။
ကဲ.. အဲဒီ ကျမသူငယ်ချင်း ဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းလဲ.. နော်။
အဲဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်း ခင်မင်းဇော်.. သူချစ်တဲ့ ကိုမင်းဇော်.. သားသား ပိုင်ပိုင် အပါအ၀င် သူချစ်တဲ့ မိသားစုနဲ့.. သူချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ သူပျော်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စိတ်လက်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်စွာ အရှည်အကြာ နေခွင့်ရပါစေ..။ သက်ရှည် ကျန်းမာ အနာမဲ့ပါစေ..။ ဘ၀တလျှောက် ပိုပြီး အောင်မြင် အနိုင်ရပါစေ..။
(သူငယ်ချင်းရေ.. မွေးနေ့ Cake မမီလို့ ပန်းတွေပဲ ပို့လိုက်တော့တယ်နော်)
ချစ်တဲ့ - မေငြိမ်း၊ ရာကျော်၊
at June 25, 20087comments:
at June 24, 2008 No comments:
ရန်ကုန်ဟာ ကျမရဲ့ မွေးရပ်မြေ...။
စည်ကားတဲ့လမ်းတွေပေါ် မက်မက်မောမော လျှောက်ခဲ့တာပဲ။
မြို့လယ်ခေါင်ကစ ဆင်ခြေဖုံးမြို့သစ်တွေဆီအထိ... ချစ်ခဲ့တာပါပဲ။
ပြီးတော့ ကျောင်းတက်ခဲ့ရာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်း၊ ဆရာမ လုပ်ခဲ့ရာ လှိုင်တက္ကသိုလ်၊ နေခဲ့ဖူးတဲ့ စက်မှုတက္ကသိုလ်ဝင်း... အားလုံးဟာ စွဲလန်းစရာ..။
ဒီလိုပါပဲ... ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်ဇာတိမြေကို ရှာကြံစွဲလန်းကြမှာပါပဲ..နော်။
ရန်ကုန်ရဲ့ဘ၀ထဲ မွန်းကျပ်မှုတွေ ဘယ်အချိန်လောက်က စရောက်လာခဲ့သလဲ.. မမှတ်မိချင်တော့။ သတိထားမိတဲ့အချိန်မှာတော့ အုံ့မှိုင်းမှောင်ဝေနေတဲ့ နိမိတ်ပုံကို တွေ့လိုက်ရပြီ။
ရပ်တည်ရာ ဘ၀အခန်းကျဉ်းလေးတောင် မှောင်လို့..........
"ငါ့အခန်းလေးထဲမှာ အလင်းတန်းများ ပျောက်ကွယ်...
ကြာလာရင် အမှောင်နဲ့ နေသားကျတော့မယ်...
ငါ့အခန်းထဲကနေ အပြင်ကို ထွက်...
စာသင်ခန်းထဲက တပည့်တွေမျက်လုံးက အေးစက်မှောင်မိုက်..
သူတို့က ပညာရချင်တာမဟုတ်ဘဲ ဘွဲ့တခုသာ ရချင်ကြတာတဲ့။
ဒါဟာ တန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးလို့ ကျမပြောတဲ့အခါ သူတို့က လက်မခံချင်ကြ။
စာမေးပွဲအဖြေလွှာပေါ်မှာ မေးခွန်းတွေ ချည်း ရေးကူးပေးလိုက်တဲ့ ကျောင်းသားလည်း စာမေးပွဲအောင်ပါတယ်။
န၀ဒေးရဲ့ကဗျာဖြေခိုင်းတာကို နတ်သျှင်နောင်ကဗျာရေးထည့်ထားလည်း စာမေးပွဲ အောင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ပထမစစ်အကြောင်းမေးတာကို ဒိုင်အာခီအုပ်ချုပ်ရေးပဲရလို့ ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သူကိုလည်း အအောင်ပေးရမယ်တဲ့။
နောက်တော့ အောင်စာရင်းထွက်တဲ့အခါ မဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေက အောင်စာရင်းပေါ်က သူတို့နာမည် တွေကို အော်ဖတ်ပြီး ဆရာမတွေရှေ့မှာ လှောင်တောင်တောင် ရယ်ကြ။
အဲဒီအခါ ကျမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခန်းလေးက မှောင်အတိကျ..။
ဒါဖြင့် ကျမရဲ့ နံဘေးဝန်းကျင်မှာကော..။
ကျူရှင်တ၀ိုင်း တစ်သိန်း... ရုံးးတွေမှာလည်း အဆင်ပြေချင်ရင် တစ်သိန်း.. ဆေးရုံမှာလည်း တစ်သိန်းလောက် တော့ပေး..။ ဘာပဲ မဟုတ်တာလုပ်လုပ်ရတယ်.. ပေး(x)သိန်း..။ ဒီလိုနဲ့ အမှောင်ထုက တဖြည်းဖြည်းသိပ်သည်း ကြီးစိုးလာခဲ့။
ရိုးသား ကြိုးစားမှုက ထမင်းလာ မကျွေးဘူးဆိုပဲ..။
အဲဒီအခါ ကျမကိုယ်တိုင် အမှောင်နဲ့ ကျင့်သားရမှာ ကြောက်လာခဲ့။
"ငါ့အတ္တကို အိတ်နဲ့ ထုပ်လိုက်တယ်...
လူမမြင်အောင် ယူကာ အမှိုက်ပုံးလေးထဲထည့်...
ကွဲသွားတဲ့ ငါ့ရင်ခုန်သံတွေ ပြန့်ကျဲ...
ရိုးသားဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ ဘ၀ထဲမှာ ရေဆာရတာ.. ထမင်းဆာရတာတွေ များလာတယ်။
ကျောင်းသားတွေက "ရော့ဆရာမ..ကျူရှင်လခ" လို့ ခပ်ပြုံးပြုံးပေးတဲ့အခါတွေမှာ
အတ္တက တကယ်ပဲ အမှိုက်ပုံးထဲ ရောက်ရောက်သွားတယ်။
ရှက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ဘ၀လို့ ခံစားရတဲ့အခါ အမှောင်ထဲ တိတ်တဆိတ် ကြေကွဲ...။
အတ္တတခုလုံး အမှိုက်ပုံးထဲ ရောက်သွားချိန်မှာ လူကတော့ စိန်ရောင်ရွှေရောင် ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် လက်ပ..လို့၊ ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ လမ်းတွေပေါ် ပပလွှားလွှားလျှောက်ခဲ့..။
ကဲ... အဲဒါကကော တကယ်ပဲ ကျေနပ်ဝင့်ကြွားစရာလား။
(ရင်ထဲမှာတော့ တိတ်တိတ် အသည်းကွဲနေခဲ့ရတာ ကိုယ်သာ အသိဆုံးပေါ့)
ဘ၀ရဲ့ ထွက်ပေါက်အဖြေမှန်ကို ရှာဆဲပဲ...
ရန်ကုန်မြို့ကြီးဆီမှာ မွန်းကျပ်လွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ ..
သူ့ဆီကနေ မကြာခဏ ခွာပြီး မြန်မာပြည်တနံတလျား.. သွားသွားလာလာ..လည်လည်ပတ်ပတ်။
အိမ်ပြင် ခဏဘ၀ထဲ ပျော်ပျော်ပိုက်ပိုက်နေခဲ့။
ပြီးတော့လည်း အချိန်တန်ရင် အိမ်ရှိရာ ရန်ကုန်မြို့ကြီးဆီကို ပြန်..။ ကိုယ့်အခန်းကျဉ်းလေးဆီကို ပြန်..။
ကျပ်ကျပ်သိပ်သိပ်ရယ်သံတွေရှိရာ ပလက်ဖောင်းတွေဆီကို ပြန်..။
အိမ်အပြင်မှာ လုံခြုံလည်း အိမ်ထဲက နှင်းကျတယ်...
ဘ၀ရဲ့ ထွက်ပေါက် အဖြေမှန်ကို ရှာဆဲပဲ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ရန်ကုန်ကို စနစ်တကျ ခင်းကျင်းပေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးပါတယ်။
တကယ့်အလှဆိုတာနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာစေတနာဆိုတာတွေကသာ လောကကို အလှဆင်နိုင်မယ်ဆိုတာကို လူငယ်မျိုးဆက်တွေနားလည်လက်ခံဖို့ ပြင်ဆင်ပြသခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဗင်ဂိုးက ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက် နားရွက်ဖြတ်ခဲ့တာဟာ.. လှောင်ပြောင်ရယ်မောစရာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း..၊
မြို့မငြိမ်းက လူတွေက သူ့ဦးနှောက်နဲ့ မတန်တော့ဘူးလို့ ခံစားရတာကြောင့်ပဲ မောင်းလာတဲ့ကားအောက် ခေါင်းထိုးထည့်ခဲ့လေသလားဆိုတာတွေ တွေးပြီး အနုပညာရှင်ရဲ့တန်ဖိုးကို နားလည်သင့်တဲ့အကြောင်း...၊
ရိုးသားလို့ ဆင်းရဲရတာဟာ နှာခေါင်းရှုံ့စရာမဟုတ်တဲ့အပြင် ထုတ်ဖော်ချီးကျူးဖို့တောင်လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း..။
ကောက်ကျစ်ယုတ်မာမှုကို ကိုယ်တိုင်မပြုပေမဲ့ ဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေတာဟာလည်း အလိုတူရာရောက်ကြောင်း..၊
"ပြည်သူဟာ ကိုယ်နဲ့တန်တဲ့အစိုးရကိုပဲ ရတယ်"ဆိုတဲ့စကားအတွက် 'ဒီနေ့လူငယ်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ... အများကြီး ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့.... ရယ်သွမ်းသွေးသံတွေကြားထဲက ထွက်ပြေးခဲ့ရ။
အဲဒီအခါ.. လက်တွေ့ဘ၀အိမ်ခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ... နှင်းမုန်တိုင်းတွေ သည်းသည်းကျ..။
မင်းအပြစ်မဟုတ်ခဲ့တာ ငါတို့ နားလည်...
ကျမကိုယ်တိုင်တောင် ရန်ကုန်မြို့ကြီးက စိတ်ပျက်စရာလို့ ညည်းညူငြိုငြင်ဖူးခဲ့ပါတယ်။
ကြည့်ပါဦးး... ကျမလည်း သူ့အပေါ်မှာ ရက်စက်စော်ကားခဲ့တာပဲ..။
တကယ်မှာတော့ သူ့ခမျာက လူတွေပြုသမျှ နုရသူ။
ဗိုလ်အောင်ကျော်.. ဗိုလ်ချုပ်တို့ သွေးတွေ ပေကျံခဲ့ရရှာတာလည်း သူ..။
၆၂သွေးတွေလည်း သူ့ဆီမှာပဲ ကျခဲ့။
၇၄..၇၆ သွေးတွေချွေးတွေလည်း သူ့ဆီမှာပဲ ကျခဲ့။
ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀ထဲ ငတ်ရသမျှ မျက်ရည်တွေကလည်း သူ့ဆီမှာပဲ ကျခဲ့..။
တော်လှန်သွေးတွေလည်း သူ့အပေါ်မှာပဲ ကျခဲ့။
မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ ချစ်လှတဲ့ ရင်သွေးရင်နှစ် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့သမီးလေးကိုလည်း သူ့ဆီမှာပဲ သိမ်းထားခဲ့ရ..။
ဒီလောက်ပုန်ကန်တဲ့မြို့ ပျက်သွားအောင် ပစ်ထားလိုက်ကြစမ်း.. ဆိုတဲ့ အာဏာရူးတွေရဲ့အမုန်းကလည်း သူ့အပေါ်မှာပဲ ကျရောက်ခဲ့..။
သစ်ပင်အကျိုးအကြေတွေ... ယင်တလောင်းလောင်းအမှိုက်ပုံတွေ.. ။
အလုပ်လက်မဲ့ လေလွင့် လူငယ်လေးတွေ.. ကလေးအလုပ်သမားလေးတွေ..။
ထမင်းငတ်နေတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ..။ ခိုးစား လုစားနေရတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ..။
မိဘ ဆရာ အဿပြာပူးပေါင်း ကလေးပညာကောင်း.. ဆိုသလို ပိုက်ဆံကိုပဲ မျက်စေ့စုံမှိတ်ကြည့်နေရလို့ အနန္တောအနန္တ ငါးပါးဆိုတဲ့နေရာမှာ အထိုင်ရခက်နေတဲ့ ဆရာတွေ..။
စိတ်ညစ်သမျှ ဒါချလိုက်ရင် မေ့တယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကြွဆေးပြားတွေ...။
ပါတီမှာ ဘာကျွေးမှာလဲ.. ထုံးစံအတိုင်း ကြယ်သီး(မူးယစ်ဆေးပြား)ပေါ့..တဲ့။
ကြယ်သီးညတွေထဲမှာ ဘ၀ဆိုတာ ပျော်စရာ.. ခေါင်းလေးတခါခါနဲ့ ငြိမ့်လို့ဆိုပဲ..။
လူစုလိုက်ပါ.. ၁၀ယောက်ပြည့်ရင် တ၀ိုင်းစာလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်လုံးတီး မြန်မာမ ပြပွဲတွေ..။
'အကို ကျမကိုခေါ်ပါ ဈေးဦးမပေါက်သေးလို့ပါ.. လျှော့ပေးပါ့မယ်'ဆိုတဲ့ ဈေးရောင်းပွဲတွေ..။
တိုင်းသူပြည်သား ပညာမတတ်လေ..ဒုက္ခရောက်လေ.. အုပ်ချုပ်ရတာ လွယ်လေဆိုတဲ့ အာဏာရှင်စနစ်တွေ...။
ရိုးသားနေလို့ မရတဲ့ခေတ်ဗျ... မရူးစမ်းပါနဲ့ .. ဆိုတာတွေ။
ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်ချနင်း.. ဆိုတာတွေ။
တော်ပါသေးရဲ့..၊ သမီးလေးက လှလို့.. ကျမတို့ အသက်ရှူချောင်နေတာ.. သမီးရဲ့ 'စပွန်စာ' က မဆိုးဘူး ဆိုတာတွေ။
အဲဒါတွေကို ရန်ကုန်မြို့ကြီးက ရွက်ထားရတာ..။
သူ့ခမျာလည်း နံစော်ပေပွလို့..၊ ရီဝေမူးယစ်လို့..၊ နာကျင်ငိုကြွေးလို့ ရှိရှာမှာ..။
ကျမ မွေးဖွားခဲ့... ကြီးပြင်းနေထိုင်ခဲ့... စွန့်ပစ်ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်..။
သူ့ဘ၀ ဘာမှမပြောင်းမလဲ..နာကျင်ပေးဆပ် .. စွန့်လွှတ်ကြေကွဲနေရဆဲ..။
Big Bag Band က ကျားပေါက်(ဟန်ထူးလွင်)ရဲ့ သီချင်းလေးပါ။
AD 3000 ဆိုတဲ့ Album ကို နားထောင်ရာက အဲဒီ "အရင်အတိုင်းရန်ကုန်"ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို တွေ့တာပါ။
ကျားပေါက်က ဘယ်လို ခံစားချက်နဲ့ဆိုတယ်မသိပေမဲ့ ခံစားသူတွေဘက်ကတော့ ကိုယ့်အမြင်အတွေးနဲ့ ခံစားမြဲမဟုတ်လား..။
အဲဒီအခါ ကျားပေါက်ရဲ့သီချင်းကို နားထောင်ရင်း.. ညည်းရင်း.. ကျမခံစားလာရတာတွေကို ချရေးဖြစ်လိုက်တာပါပဲ။
at June 16, 20085comments:
၄၃ တဲ့။ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဂဏန်းလေးနှစ်လုံးက စိတ်ဝင်စားစရာ.။ ဒါဟာ.. ကျမအတွက် လျှောက်ရမယ့် ခရီးရဲ့ တ၀က်လား.. ဒါမှမဟုတ်.. သုံးပုံနှစ်ပုံစာလားး.. ဒါမှမဟုတ် ခရီးဆုံးကာနီးလား..။ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ပါ။
အင်းး ဒါပေမဲ့ ဖြတ်ခဲ့သမျှ ခရီးတာမှာတော့ ကျမက ကိုယ့်ဘ၀ကို ကျေနပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူပါပဲ..။
ဘ၀ဆိုတဲ့ အချိန်တိုလေးထဲ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေထဲ သူများအတွက်လည်း ပါအောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ သက်တမ်းတ၀က်ကျော် လုပ်ခဲ့။
'မဖြစ်သေးပါဘူး.. တကယ်က ကိုယ့်အတွက် .. နည်းနည်း သူများအတွက်များများ လုပ်ရမှာ..၊ လုပ်နိုင်ရမှာ..' လို့ တွေးမိ။
(အန်တီစုကတော့ ဒီအသက်အရွယ်မှာပဲ မြန်မာပြည်အတွက် သူ့ဘ၀ကို ပေးဆပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်)
ကျမဆီမှာကတော့ 'ဒါပေမဲ့'တွေ ရှိနေသေး..။
ကျမရဲ့အကြီးမားဆုံး ချွတ်ယွင်းချက်က စိတ်ခံစားမှုနောက် လိုက်လွန်းတာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ.. ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလေးလုပ်နေရမှ တန်ဖိုးရှိတာဆိုပီး လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ဖို့ပဲ ရှင်သန်ခဲ့..။ ပြီးတော့ ဘ၀ဆိုတာအပေါ် အားကောင်းတဲ့ ချစ်စိတ်တွေနဲ့..။
ပြီးခဲ့တဲ့ မွေးနေ့တွေမှာ အဖေ့ကို သတိရ.. အမေ့ကို သတိရ..။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စားကြသောက်ကြ..။
တကယ့် သမားရိုးကျပါပဲ..။ ဘ၀ဆိုတာကို တမက်တမော ဖက်တွယ်လိုစိတ်တွေနဲ့ပေါ့.. ။ ဒါပေမဲ့....
လူ့ဘ၀ဆိုတာ... စီရင် ရေးသားပြီးသား အမိန့်စာတခုလို့ ထင်..
လူ့ဘ၀ဆိုတာ ဆရာတော်ဦးဗုဓ်က နန်းမတော်မယ်နုကို မိန့်သလို သူ့ကြွေးရှိသမျှ အကုန်ဆပ်ကြရတဲ့ နေရာ..။
လူ့ဘ၀ဆိုတာ ရေစပ်နားမှောက်ခုံသေ.. သစ်ပင်ပေါ်တွဲလောင်းချိတ်သေ.. မြစ်ရေထဲ မျောချင်တိုင်း မျောသေ..။ အစာငတ် ရေငတ်သေ..။ အနာရောဂါဖြစ်သေ..။
ပညာတကယ်မတတ်ဘဲ သေ..။ အဖိနှိပ်အမျိုးမျိုး ခံပြီး သေ..။ အလိမ်အညာခံပြီးသေ..။ အရက်စက်ခံပြီးသေ..။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို ငတ်ပြီးသေ..။ တော်လှန်ရင်း သေ..။ မသေခင်အခိုက်အတံ့တော့ အလူးအလိမ့် ရင်ဆိုင် ခံစားကြပေါ့.. ။
အဲဒီအခါ ဒီတကြိမ်မွေးနေ့မှာ ကျမက ဒီလိုဘ၀ထဲမှာ စောစော သေသွားရတာကမှ ကံကောင်းသေးလို့ တွေးနေမိပြီ။
ဇာတာထဲက "အသက်၁၂၀ရှည်စေသော်ဝ်"ဆိုတာကို "နေချင်စိတ်ရှိသလောက်သာ နေခွင့်ရစေသော်ဝ်"
at June 14, 2008 23 comments:
ဒီတလော ဘယ်လိုမှ စာရေးမရ..။
ကျမစိတ်ရော.. ကိုယ်ရော.. ဦးနှောက်ရော.. ကြေမွနေတယ်လို့ ခံစားနေရတာပါ..။
... အရာရာကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရသလို... ခံစားနေရတာ..။
ဧရာဝတီတိုင်းဆိုတာ ကျမရဲ့ နှလုံးကို အင်မတန်ပူနွေးစေတဲ့ အမည်နာမပါ..။
ကျမအဖေက ပုသိမ်သား၊ အမေက ကျောင်းကုန်းသူ.။ ဒါမဲ့ အမေက ပုသိမ်မှာ ကျောင်းလာတက်ရတော့ ပုသိမ်သူလိုပါပဲ..။ ကျမတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက နွေကျောင်းပိတ် ဆိုရင်.. ရန်ကုန်ကနေ ဗန္ဓုလဆိုတဲ့ နှစ်ထပ် သင်္ဘောကြီး စီးပြီး ပုသိမ်ကိုသွားလည်တာက ပုံမှန်အလုပ်တခုလိုပါ..။ ညနေ၄နာရီဆို သင်္ဘောစထွက်.. နောက်တနေ့ ၁၁နာရီလောက်ဆို.. ပုသိမ်ရောက်..။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပုသိမ်သင်္ဘောဆိပ်ကို ဆီးမြင်ရတာနဲ့ ပျော်တာပဲ..။ ကျမအကြိုက် မုန့်ဟင်းခါး.. ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ နဲ့ ငါးချဉ် ပုဇွန်ချဉ်တွေက ပုသိမ်ကို ဘယ်ကမှ မမီ..။ ပြီးတော့ ဟလ၀ါ..။ နောက် အိမ်မဲ မုန့်ဟင်းခါး.. မြောင်းမြဆိပ်ကမ်းက အကြော်စုံ.....။
တပေါင်းလပြည့်နဲ့ ကြုံရင်တော့ မော်တင်စွန်းဘုရားပွဲ သွားတာပေါ့..။ သိပ်လှတဲ့ ပင်လယ်ထဲက ကျွန်း..။
ဟိုင်းကြီးကျွန်းတ၀ိုက်က သဘာ၀၀န်းကျင်အလှတွေကို ဒါရိုက်တာမောင်တင်ဦးရိုက်တဲ့ 'တခါက တဘ၀' ရုပ်ရှင်မှာ တ၀ကြီး ကြည့်နိုင်တယ်..။ အလှတရားနဲ့အတူ နိုင်ငံအတွက် အစာရေစာတွေ ထုတ်ပေးနေတဲ့ ဒေသကြီးပါ..။ ခုတော့ဖြင့်... ... ... ... ... ။
ဒီတလောမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ အဖေ့ကို သိပ်သတိရတာပါပဲ..။ အဖေက သူနေရတော့ဘူးဆိုတာ သိတော့ နာရေးကြော်ငြာကို ကိုယ်တိုင် ရေးထားခဲ့တာပါ..။ အဲဒီမှာ သူ့နာမည်ရဲ့ နောက်မှာ ရာထူး ဘွဲ့ထူး ဘာ ညာ တွေ လုံးဝမတပ်ဘဲ (ပုသိမ်)လို့ တပ်ခဲ့တာပါ..။ သူက ဇာတိမြို့ကို အဲလို စွဲလန်းသလို ဧရာဝတီတိုင်းကိုပါ စွဲလန်းတာပါ..။ ရေနံ့ မြေနံ့ကကို မတူဘူးဆိုပဲလေ..။ ခုတော့ အဖေရှိမနေတော့တာဘဲ ကောင်းသားလို့ တွေးနေမိပါတယ်။ သူသာရှိရင်.. ခုလို တစစီ ကြေမွပျောက်ပျက်သွားတဲ့ သူ့ဒေသကြီးအတွက် တော်တော်ကြီး ကို အသည်းကွဲရှာမယ်..။
တကယ်တော့ ဧရာဝတီတိုင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့ အသည်းနှလုံးပါလေ..။ တပြည်လုံးအတွက် ၀မ်းစာ အဓိကရှာပေးနေတဲ့ ဒေသကြီးး..။ ကျေးဇူးရှင် လယ်သမားတွေ ရေလုပ်သားတွေ ရှိရာအရပ်။ ကျမတို့ ဗမာတွေပြောလေ့ရှိတဲ့ 'ဆားနဲ့ပဲ စားရ... စားရ' ဆိုရင်တောင် အဲဒီ မရှိမဖြစ် ဆားတွေကိုလည်း အဲဒီရပ်ဝန်းကပဲ ထုတ်ပေးနေတာပါ..။ (ဒါတောင် တချို့က ရက်ရက်စက်စက် ပြောသေး.. 'တော်ပါသေးရဲ့.. သေသွားတာတွေ အများစုက တောသူတောင်သား လက်လုပ်လက်စားတွေမို့လို့' တဲ့လေ..။ ပြောတဲ့သူတွေက အဲဒီ တောသူ တောင်သားဆိုသူတွေဟာ လယ်လုပ်ငန်းပညာရှင်.. ရေလုပ်ငန်းပညာရှင်.. ဆားလုပ်ငန်းပညာရှင်.. မွေးမြူရေး ပညာရှင်တွေဆိုတာကိုတောင်မှ နားမလည်)
ဟိုး ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာ.. အပင်တွေပေါ်မှာ.. လယ်ကွင်း ဆားကွင်းတွေထဲမှာ အတုံးအရုံး၊ ပိုးစိုးပက်စက် သေနေကြရရှာတာ ကျမတို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေ.. ကျမတို့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် တွေပါ..။ အဲသလိုပဲ ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်စမ်းလို့ .. အပျက်အစီးပုံတွေထဲ ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ချခံထားရတဲ့ မုန်တိုင်းထဲက ရှင်ကျန်နေခဲ့ရ ရှာသူတွေ ဟာလည်း ကျမတို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင် တွေပါ..။ သူတို့ခမျာ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ စားပွဲတလုံး ကွန်ပျူတာတလုံးနဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေကြချိန်..၊ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ စက်မှုပစ္စည်းတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ သက်သောင့်သက်သာ စပါးထုတ်.. ဆားထုတ်.. ကောက်ပဲသီးနှံထုတ်နေကြချိန်မှာ.. နွားနဲ့ ပင်ပင်ပန်းပန်း ဖက်ရုန်းကြရ.. တာဝန်ရှိအစိုးရက မပံ့ပိုးတာကြောင့် မလိုအပ်လှပါဘဲနဲ့ နေပူကျဲတဲထဲ ကိုယ်ခန္ဓာအားအင်တွေ စိုက်ထုတ် သုံးနေခဲ့ကြရတဲ့ အလုပ်သမားကြီးတွေပါ..။
သူတို့ဟာ.. ဘ၀ထဲမှာ အင်မတန် ရောင့်ရဲတင်းတိမ်..။ အင်မတန်မှ အေးအေးချမ်းချမ်း နေတတ်တဲ့သူတွေပါ..။ ပြီးတော့ မခိုမကပ် အလုပ်လုပ်တတ်ကြသူတွေမို့ ၀မ်းရေးအတွက် မပူပင်ခဲ့ရသူတွေပါ..။ တနေကုန် အလုပ်လုပ်.. ညနေ မိသားစု ထမင်းဝိုင်းထဲ လတ်ဆတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေ စား.. ညဘက်ကျတော့ ကိုယ်ပိုင် မီးစက်လေးတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်လေး ဘာလေးကြည့်..။ တချို့က ရေဒီယိုနားထောင်..၊ စစ်အစိုးရက မကောင်းဘူး ဆိုတာတော့ ကောင်းကောင်းသိ.. သူတို့ကို မပံ့ပိုးတဲ့အပြင် သူတို့ဆီက ရသမျှ ညှစ်ယူနေ တာတွေတော့ သိ..။ ဗိုလ်ချုပ်သမီးကိုတော့ သူတို့ ချစ်ကို ချစ်တာပါ။ စစ်အစိုးရဆိုတာကြီးက သူတို့ကို အပြစ်ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ရက်ရက်စက်စက် စီရင်ခဲ့တာ ဆိုရင်တောင်မှပဲ ဒေါ်စုကို ချစ်မိတဲ့ အပြစ်လောက်သာ ရှိမယ့်သူတွေပါ..။
သူတို့ခမျာ ဘာမှ မမှားခဲ့။ ဘာအပြစ်မှ မရှိခဲ့။ ဒါဖြင့်.. ကံကြမ္မာကပဲ မှားယွင်းခဲ့လေသလား..။ ခုလောက် ပိုးစိုးပက်စက် ဆုံးပါးရတာ..။ ကျန်ရစ်သူတွေခမျာ.. တမြေတည်းအတူရှိနေလျက်နဲ့မှ ချစ်တဲ့ ခင်ပွန်းကို.. ဇနီးကို.. သားသမီးကို.. အဆွေအမျိုးတွေကို မြေချခွင့်.. ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခွင့်.. အမျှအတန်းဝေခွင့်.. သေသလား ရှင်သလား ရေရေရာရာ သိခွင့်တောင်မှ မရရှာ..။ ပြီးတော့ စားစရာမရှိ.. သောက်စရာ ရေတောင်မှ မရှိ.. ဘာဆိုဘာမှမရှိ...။ ဒါတောင် သူတို့ရှိနေတာက သူတို့ရဲ့ အမိမြေပေါ်မှာ..။ ကိုယ့်အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်ပါတဲ့..။ ပြီးတော့ သဘာဝသယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝလှပါတယ်ဆိုတဲ့မြေမှာ..။ ဒါပေမဲ့ စစ်တလင်းဖြစ်နေသလို ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်တောင် မဖန်တီးရတဲ့ဘ၀တွေထဲ..။ ဗမာပြည်ဟာ.. ရှေ့တန်း စစ်မျက်နှာ..။
အစုလိုက်အပြုံလိုက် ကြမ္မာငင်တာဟာ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့ပါတဲ့.. သူတို့ထဲက တချို့က ပြောရှာပါ တယ်။ ပြီးတော့.. ထမင်းလေးစားရရင် တော်ပါပြီ...တဲ့။ သားတော့ ကျောင်းမတက်ရတော့ဘူး ထင်ပါတယ် တဲ့..။ ကိုယ့်အိမ်ဝိုင်း ကိုယ့်မြေယာတောင် ပြန်ရပါ့ဦးမလားပဲဗျာ.. တဲ့၊ မုန်တိုင်းထဲမှာ ဘာလို့ တခါတည်း သေမသွားတာပါလိမ့်.. အမေ့ကိုက အကုသိုလ်ကြီးတယ်ထင်ပါရဲ့ကွယ်.. တဲ့။ သမီးမောင်လေးနဲ့ ညီမလေးကို ကာကွယ်ဖို့ သမီးမှာ တာဝန်ရှိတယ်တဲ့.. စကားတောင် မပီချင်သေးတဲ့ ၁၂နှစ် အရွယ် ကလေးလေးက ပြောတယ်။ ကျနော်တို့မှာ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်း ဒုက္ခရောက်နေတာကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီဖို့ တာဝန်ရှိတယ်တဲ့... ပြောတယ်.. ပြောတယ်.. ပြောတယ်..။ ကျနော်တို့ကို ပုဂ္ဂလိကအလှူရှင်တွေ လှူတဲ့ ရတန်သရွေ့ ပစ္စည်းကိရိယာလေးတွေနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးလေးတွေ ပြန်လုပ်နေပါပြီ.. တဲ့။ ရတာလေးတွေကို ရွာကလူတွေ အားလုံး ဝေမျှစားကြတယ်.. တယောက်နဲ့ တယောက် စောင့်ရှောက်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လေ..တဲ့..။ တာဝန်..တာဝန်..တာဝန်...
တကယ်တော့ သူတို့တတွေ ယူနေကြတဲ့ တာဝန်ဆိုတာ ဘယ်သူကမှ ပေးထားတာ မဟုတ်ပါ၊ လူအချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ်.. စေတနာစိတ်တွေနဲ့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား.. ကိုယ်စားနေတဲ့ အထဲက ခွဲကျွေး.. လုပ်နေကြ တာပါ..။ တာဝန်ဆိုတာ လူပီသတဲ့ စိတ်အပေါ်မှာ ပေါက်ဖွား လာတာပါ။ မရှက်တတ်သူတွေက မရှက်ပေမဲ့.. တာဝန်ယူမှုရဲ့ တန်ဖိုး ဆိုတာကိုတောင် နားမလည်နိုင်လောက်အောင် ညံ့တဲ့သူတွေက ညံ့ပေမဲ့.. ကျမတို့ လူထုက မညံ့ကြပါလား။ အဲဒီအခါ.. ကျမကတော့ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်တဲ့အပေါ် အဝေးက နေ စိတ်ထိခိုက်.. နာကျင်ကြေမွ...။ ပြီးတော့ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင်.. မည်မည်ရရ တာဝန် မယူနိုင်မှု အပေါ်မှာလည်း အရှက်ရနေမိပါတယ်။ တပြိုင်တည်းမှာ နောက်ထပ် ခံစားနေရတာကတော့ ချစ်စရာကောင်းလှ တဲ့ ကျမတို့ရဲ့ ဧရာဝတီဒေသကို နှမျောတသ ပြန်လည် ရယူ လိုစိတ်နဲ့ လွမ်းရတဲ့အလွမ်းပါပဲ ..။
ကျမ ဘာလို့ နှမျောတသ နေရတာပါလဲ..။ သူခိုးဓါးပြတွေ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာ ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်း ဒေသကို ဧရာဝတီတိုင်းသူတိုင်းသားတွေအနေနဲ့ အရင်ကလို ပြန်မြင်ရခွင့်.. ကိုယ့်မြေရယ်လို့ ပိုင်ပိုင် နေထိုင်ခွင့်။ ပြန်လည် ချစ်ခင်ပေးဆပ်ခွင့်တွေမှ ရှိပါ့ဦးမလား..။ ဧရာဝတီတိုင်းသူတိုင်းသားတွေ ပိုင်တဲ့ မြေကို ဘယ်သူခိုးဘယ်သူဝှက်တွေက မတရားသဖြင့် လုယူသိမ်းပိုက်လေဦးမလဲ..။ အရှက်အကြောက်ကင်းမဲ့စွာ မင်းမူ အုပ်ချုပ်တာကို ခံနေရတဲ့ ဘ၀ထဲမှာ နောက်ထပ် ဘာတွေကို ဘယ်လောက် ဆုံးရှုံးရလေဦးမလဲ..။
ကျမက အားကိုးရာမရှိသလို ခံစားရတဲ့အခါ မမြင်ရတဲ့ သစ္စာတရားဆိုတာကို အားကိုး ယုံကြည်တတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မကောင်းမှုအတွက် ပြန်ပေးဆပ်ရတယ်ဆိုတာကို ယုံတယ်။ တရားကို နတ်စောင့်တယ်ဆိုတာ ကို ယုံသလိုပဲ တခါတလေမှာ လောကမှာ နတ်ဆိုး မင်းမူတတ်တာကိုလည်း ယုံပါတယ်။ အဲသလိုပဲ နောက်ဆုံးမှာ မတရားသူတွေဟာ ထိထိခိုက်ခိုက်ဘ၀တွေနဲ့ ကျဆုံးကြရမယ်ဆိုတာကိုလည်း ယုံပါတယ်..။
လောလောဆယ်တော့.. နာကျင်ကြေမွတဲ့ စိတ်နှလုံးကိုပဲ အားအင်အသစ်အဖြစ် မွေးရင်း ကျမတို့ ချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေကို ၀ိုင်းထူကြဖို့...နဲ့ မတရားအစိုးရကို တော်လှန်ပုန်ကန်ရေး.. မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာတွေကို ဖီဆန်ရေး... တနိုင်တပိုင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုပဲ ကိုယ်စီ ဆက်ကြိုးစားသွားကြရမှာပါပဲ..။
ကျမသူငယ်ချင်း 'ယောဟန်အောင်'ကတော့ " ဒီနေရာကို ဘုရားသခင်စွန့်သွားခဲ့တာ ကြာပြီ " တဲ့။ ကျမကတော့... ဒီနေရာကို ဘုရားသခင် ပစ်မထားနိုင်တော့တဲ့အတွက် ပြန်လာတော့မှာလို့ ယုံပြီး စောင့်နေခဲ့တာ ကြာပြီ...။
at June 11, 20083comments:
နာဂစ်ကြောင့် ..ခံစားနေရ သူတွေ နဲ့ ..စံစား နေရ သူတွေ...
ရသမျှ သစ် ၊ ၀ါးအတို အစလေးတွေ နဲ့ ပဲ ဖြစ် သလို ပြန်ဆောက် ရ တာ ပဲ ...ဗျ
အရင် တို့တွေ ဒီ အချိန် ဆို ကျောင်းတက် နေရ ပြီ နော် ......................
ရှေ့ကို ဘာဆက် လုပ် ရ ပါ့မလဲ...........
ဘာကို မှ မတွေး ချင် တော့ဘူး.........
အခု လို ကူညီ တာ နိုင် ငံတကာ ကို ကျေးဇူး တင် ပါ တယ်........ တကယ် ပါ.....
ပစ္စည်းတွေ က တော့လိုလို သေး မရှိအောင် ပါ ပဲ...........
ကယ်ဆယ် ရေးလုပ်ရ တာ ထင် သလောက် မခက် ပါ ဘူး............
( ဒါကြီး ကိုတော့စစ်တပ် ထဲ ပြန် ရင် သယ် သွားရ မှဆိုတော့သေသေချာချာဂရု စိုက် ရ တယ်..ဗျ )
ယ­­­­ခု ပုံများကို ကြည့်ပါ နာဂစ် မုန်တိုင်း ဒါဏ် ခံ ခဲ့ ရ သော ဒုက္ခ သည် များ အတွက် နိုင် ငံ တကာ မှပေး ပို့လှူဒါန်း ထားသော ကယ် ဆယ် ရေး ပစ္စည်း များကို အမှန် တကယ် အသုံး ပြုနေသူ များက တော့မြင် ကြ ရ တဲ့ အတိုင်း ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် …။ ပထမ တော့ခိုး ရောင်း တယ် …နောက်ခိုးရောင်း လို့မရ တော့..ဒုက္ခ သည် တွေ ကို ဝေ ဌ မပေး ပဲ ကိုယ် တိုင် သုံး စွဲ ပြီ ဇိမ် ယစ် နေ ကြ တယ်..။ ဘယ် မှာ လဲ ကယ် ဆယ် ရေးတွေ လုပ် နေ ပါ တယ် ဆို တာ …။ အင်္ကျီပူ တိုက် ကော့ ကော့လေး နဲ့နိုင် ငံ တကာ က ပေး တဲ့ရွက် ဖျင် တဲ.. ထဲ မှာ …မိုးအေးအေး နဲ့TV လေး ကြည့်ပြီး ဟန် ကျနေ ကြတာ ..။ သူတို့ စစ် တန်းလျား မှာတောင် အခု လိုမနေ ကြရ ဘူး ….။
သူတို့ပါတ် ၀န်း ကျင် မှာ ဒုက္ခ ရောက် လို့လာရောက် မှီခိုနေ တဲ့သူတွေ ကိုတော့အိမ်တော် ပါ ကျေးကျွန် တွေ များ မှတ် နေ လား မသိ … အ၀တ် လျှော် ခိုင်း ရ တာ နဲ့ချိုး ဖို့ရေ ခပ် ခိုင်း ရ တာ နဲ့ ….။ ရွက် ဖျင် တဲ တွေ ထိုးထားပေ မယ့်ဒုက္ခ သည် တွေ အတွက် မဟုတ် ဘူး…..။ လူကြီး လာတော့ မယ် ..နိုင် ငံတကာ က အဖွဲ့အစည်းတွေ လာ တော့မယ် ဆို တော့မှ ကြို တင် စီစဉ် ထား တဲ့ အတိုင်း သူတို့နဲ့ပလဲ နံ ပ သင့်တ့ဲ သူတွေ ဆွဲ ရွက် ဖျင် တဲ ထဲ ဆွဲ ထဲ့ ပြီး ..။ သူတို့ သင် ထား တဲ့ အတိုင်းပြောကြရ တယ် …။ ဒီ ပုံတွေ ကို ကြည့်ငြင်း ချင် ကြသေး လား…။
နိုင် ငံ တကာ က မျှော် လင့်ထား တာ နဲ့တခြား ဖြစ် နေ တယ်…။တကယ် ဒုက္ခ ရောက် တဲ့ သူတွေ ပေး တဲ့ ကယ် ဆယ် ရေး ပစ္စည်းတွေ ဟာ… စစ် တပ် အတွက် တကယ့်အသုံး ၀င် တဲ့ပစ္စည်းတွေ ဖြစ် နေ တယ်…။ နအဖ ကို စစ် အသုံး အဆောင် ပစ္စည်းတွေ ပံ့ ပိုး ပေး သလို ဖြစ် နေတယ် …။ အမှန် တကယ် လေဘေး ဒါဏ် ခံ ခဲ့ ရ တဲ့ သူတွေ ကို လဲ ဘ၀ အမှန် တွေ ကို နိုင် ငံ တကာ က မြင် တွေ နိုင် အောင် ဖော်ပြလိုက် ပါ တယ် ….ကျောချ စရာ တနေ ရာ အတွက်မိမိ ဘာသာ ကြံ ဖန်ပြီး နေ ကြ ရ တာပါ ….။ အခု လဲ အဲဒီ နေ ရာတွေမှာ မနေ ကြရ တော့ပါ ဘူး…။ နှင် လွတ် နေ ပါ ပြီ ..။ သုံးရက် အတွင် အပြီး ဖယ် ပေး ရ တော့မှာပါ…။ အဲ ဒီ တော့ကျနော် ပြောပါ ရစေတော ….။
ကျနော် တို့ အမြင် မှာ နိုင် ငံ တကာ က တစ် ရာ ဖိုး ပေး လို့ဒုက္ခ သည် တွေလက် ထဲ တစ်ဆယ် ဖိုးရောက် ရင် တော် ပါ ပြီ လို့သဘော ထား ပြီး ကြည့်နေ တာ …။အခု တော့ ဒုက္ခ သည် တွေ လက် ထဲ ဘာတခု မှရောက် မလာ တဲ့အတွက် နိုင် ငံ တကာ အနေ နဲ့ နောက် ထပ် ကယ် ဆယ် ရေး နဲ့ပါတ် သက် ပြီး ဘာ မှ မပို့ပါ နဲ့ တော့..။ ပို့ သမျှ ပစ္စည်း မှန် သ မျှ ဟာ စစ် တပ် ကို ထောက် ပံ့ သလို ဖြစ် နေ ပါ ပြီ…။ဒါ တွေ ကို အသုံး ပြု ပြီး … ကျနော် တို့ပြည် သူတွေ ကို နှိပ် စက် သ မှု့ပြုနေကြ ဦး မှာ ပါ ….အမှန် တကယ် ပေး ပို့ကူ ညီ ချင် ကြမယ် ဆို ရင် တော့ကိုယ် တိုင် ဒုက္ခ သည် တွေရဲ့ လက် ထဲ ရောက် မည့်နည်းလမ်း များ ရှာ ကြံ ပြီး ကူညီ ပေး ပို့ကြပါ လို့တိုက် တွန်း လိုက် ပါ ရ စေ……….။
(ကျနော့ရဲ့ ယခု ပို့စ် ကို လဲ ဘာသာ ပြန် ပြီး ဘလော့အသီး သီး မှာ ဖော် ပြပေးကြပါ ၊ နိုင်ငံတကာ က သိ အောင် တင် ပြကြပါ လို့ဘလော့ ညီ အကို မောင် နှမ များကို အနူးအညွတ် တောင်း ပန် ပါ တယ်…။) ( ဓါတ်ပုံ ပေးပို့ လာသော ..တာဝန် သိ ညီအကို တဦးအားကျေးဇူး တင် ရှိပါ သည်...။
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 06:27
at June 06, 2008 1 comment:
email ထဲက လာတဲ့ စာလေးတစောင်...
နိုင်ငံတော် အာကျီးအာကဲ အနေဖြင့် မုန်တိုင်းကျရောက်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် လေဘေးသင့်ဒေသများသို့ သွားရောက်ရန်ရည်စူးခဲ့သော်လည်း တပ်မတော်၏ အကြီးအကဲဖြစ်သည်ဆိုသောကြီးမားလေးလံလှသော တာဝန်ကြီးအားထမ်းဆောင်ထားရသည်နှင့်တပြိုင်နက် ပိုးစိုးပက်စက်သေနေသော အလောင်းများအား မကြည့်ရဲခြင်း သရဲကြောက်ခြင်းတို့ ကြောင့်သာ ပြူးကြောင် ထိပ်ပြောင် ငပေါ သိန်းစိန်အား ယောင်ခြောက်ဆယ် အရင်လုပ်ပါစေဟူသော ဆင်ခြေဆင်လက်ဖြင့် ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်၏ ပေါင်ကြားထဲဝင်ပုန်းနေခဲ့ကာ အမျှော်အမြင် ရှိရှိဖြင့် နားစွင့်နေခဲ့သည်ကို မသိနားမလည် အတင်းပြောချင်သော ပြည်တွင်း ပုဆိန်ရိုး တရုတ် သားဆိုး မြေးမိုက်များအား စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် "ကဲ ဘာပေါချင်ကြသေးလဲ"ဟုသာ ၀င်းဦး အထာဖြင့် ညောင်နာနာ မေးလိုက်ချင်ပါတော့သည်။
နုံ ငန်းထော် အာကျီးအာကဲ သည် သူ၏ ကျက်သရေယုတ်စူပုတ် မဲညစ် မျက်နှာမသစ်သောစုတ်ချာနုံနဲ့လှသည့် ဥပဓိရုပ်ကို ကနခိုနှစ်ဇွန်းစာ ပါးစပ်ထဲ ဖြဲ ခွံ့ ၍ အပြစ်ပေးခံထားရသည့် ကြာကူလီရုပ်ခံ ဖြင့် စူ ပွ ဖောင်းကား သော ဗိုက်ပူကြီးအား နွားမ ပဋိသန္ဓေရင့် သလို လေးတိလေးကန် ခြေလှမ်းများ တလှမ်းခြင်းလှမ်းလျှက် တွေ့ ကရာ လူ၏ မျက်နှာကို ကြင်နာသယောင် ဟန်ဖြင့် တယောက်ခြင်း နှပ်သုတ်ရင်း ဓါတ်သေ ဓါတ်ရှင် မှတ်တမ်းများ အရိုက်ခံကာ သူ့နောက်မှ ငယ်ပါကို မြွေပွေးကိုက်ထားသလား အထင်ရှိရလောက်အောင် ပျာ နေသည့် ငဖားများအား "ဟေ့ကောင်တွေ ငါ့ဖို့ ချောကလက်တွေအကုန် စုထား၊ ကျန်တာတွေ ဈေးတင် ရောင်းလိုက် ဒီဒုက္ခသည်တွေ ဖားငါးရှာစားလို့ရတယ် ကြားသလား"ဟု အမျှော်အမြင်ရှိရှိ ညွှန်ကြား ခဲ့ပါသည်။
ခပ်တည်တည်ဖြင့် ပြူးကြောင် ထိပ်ပြောင် စားပြီးနားမလည် ၀မ်းကြီးချုပ်သိန်းစိန်ကိုယ်တိုင် အနီးကပ်၍ ပြောင်ရာ ဆီလူးထားသော ဆံပင် တမျှင် နှစ်မျှင်သာရှိသည့်၊ ဖြုတ် နှင့် ခွေးသန်းထက် အနည်းငယ် သေးငယ်သော မဟာ နဖူးကြောကြီး တင်းသည် အထိ အဘယ်သို့ ခိုးရမည်နည်း၊ မည်ကဲ့သို့ မသာအိမ်ဖဲဝိုင်း တက်လိမ်ရမည်နည်း ဟူသော အကြံအစည်များဖြင့် ဒုက္ခသည်တို့၏ ထိုင်ရှိခုိးအားကိုးမှုအား စုတ်ချာ သိမ်ဖျင်း သော ဥပဓိရုပ်မှလွဲလျှင် တန်ဘိုးရှိလှစွာသော ဖိနပ် ယူနီဖောင်း လက်စွပ် လက်ပတ်နာရီ တပြောင်ပြောင်ဖြင့် လျှောက်ပြန်သံပေး လုပ်နေသည့်အတွက် ဘိုကျွတ်ပုကြီး သန်းရွှေ အနေဖြင့် အတွေးအခေါ်နုံနဲ့သူပီပီ အားကျ ယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ်ကလေးဖြင့်သာ လူထုကြားသို့ စိတ်မသက်မသာ ဆင်းလာခဲ့သည်မှာ သေဆုံးသူများအတွက် ဆွမ်းသွပ်ရန်သာ အဆင်ပြေလောက်ငှဖူလုံကြသေးလျှင် ရက်လည်ဆွမ်းသွပ်ပြီးသည့် အချိန်ထက် အနည်းငယ်ပင် ကျော်လွန်နေခဲ့ပြီဖြစ်သော ကာလ ဖြစ်ပါသည်။
ဘိုကျွတ်ပုကြီးသည် လိုအပ်သည်များအပြင် ပိုပိုလျှံလျှံ ရရှိစေရန်အတွက် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အသုဘအား ပြကာ နိုင်ငံတကာသို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံ တောင်း ယူလိုက်သည်အထိ အမျှော်အမြင်ကြီးမားပုံကား ယခုထိ အကူအညီမဲ့ တွယ်ရာမဲ့ နေစရာမဲ့ငတ်နေရသော ပြည်သူလူထုနှင့် သားစဉ်မြေးဆက် အဆက်ဆက် အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက် ရာသက်ပန် အမှတ်ရ ဆဲဆို ရွံရှာ ပြက်ရယ်ပြုရမည့် မဟာ သောက်ရှက်ကြီး ဖြစ်ပေတော့သည်။
နုံငန်းထော် အာကျီးအာကဲ၏ အဆိုပါ ခရီးစဉ်သည် အမှန်ပင် ထူးခြားပြီး အံ့သြဖွယ် အကြင်နာကင်း သောက်ရှက်မဲ့မှု တုနှိုင်းမရှိသည့် ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါပေ၏။ နုံငန်းတော အာကျီးအာကဲ အပေါ် အမျိုးမျိုး ဝေဖန် ကဲ့ရဲ့ လှောင်ပြောင်နေကြသည့် နအဖ နှင့် ကြံ့ဖွတ် အဖွဲ့အတွင်းမှ တရုတ် လက်ပါးစေ ပုဆိန်ရိုးများနှင့် နိုင်ငံတကာကို လက်ဖြန့်တောင်းစားလိုသော ယူနီဖောင်းဝတ် သူတောင်းစားကြီးများကို စိတ်ပျက်လက်ပျက်နှင့် "ကဲ... ဘာပြောချင်ကြသေးလဲ" ဟူ၍သာ မေးလိုက်ချင်ပါတော့သည်။
နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအနေဖြင့် မုန်တိုင်းကျရောက်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် လေဘေးသင့်ဒေသများသို့ သွားရောက်ရန် ရည်စူးခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး လုပ်နေသည့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်နှင့် အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေတော့ ဆိုသည့် ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုမျိုးနှင့် ယခုကဲ့သို့ လုပ်ငန်းများ အတော်အသင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့် အခြေအနေရောက်မှ လာရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ၏ ပုဂ္ဂလိကဆန္ဒထက် ဒုက္ခသည်များ၏ အရေးကို ဦးစားပေးပြီး ကယ်ဆယ်စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများ အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်အထိ ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းပေးခဲ့သည့် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ၏ ဆင်ခြင်တွေးခေါ်မှုနှင့် ရင်တွင်းမှ စေတနာအမှန်ကို သိလိုက်ရပြန်သည့်အခါ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲအပေါ် အမျိုးမျိုး ဝေဖန်ပုတ်ခတ်နေကြသည့် ပြည်တွင်းပုဆိန်ရိုးအချို့နှင့် ပြည်ပမီဒီယာ များကို စိတ်ပျက်လက်ပျက်နှင့် "ကဲ - ဘာပြောချင်ကြသေးလဲ" ဟူ၍သာ မေးလိုက်ချင်ပါတော့သည်။
at June 05, 2008 No comments:
ကိုယ့်အကြီးအကဲဆိုသူရဲ့ ဦးနှောက်အဆင့်နဲ့ စေတနာနည်းပုံကို ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ ဖြန့်ဝေလိုက်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ပုံပေါ် click ပြီးကြည့်ကြပါ..။
at June 02, 20082comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မခန့်လေးစား ထိကပါး ရိကပါး ဝေဖန်ရအောင် ကျမက ဘာမို့လို့လဲ..
ကိုယ့်အလုပ်တွေနဲ့ ကိုယ်ရှုပ်… ပြီးတော့ တော်ရုံဆို ၀င်မပြောချင်.. လို့ ထားထားလိုက်တာ။ ခုတော့ နည်းနည်းလည်း အားပြီ။ ပြီးတော့ ပြောချင် စိတ် လည်...
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်လောက်က ထင်ပါတယ်။ Beauty Magazine မှာ စာရေးဆရာကြီးတွေ (မှတ်မိသလောက် ဦးအောင်သင်း၊ မောင်ကိုယု နောက်တယောက်က ဆရာငြိမ်းကျော်လား....
ကျမ ငယ်ငယ်က အဖေ့စာအုပ်စင်မှာ တွေ့သမျှ စာအုပ်တွေ ဆွဲဖတ်ရင်း ပေါ်လီယာနာ တို့ .. ထမီကျွတ်၍ လွှတ်လိုက်မည် တို့၊ မပန်ပါနဲ့ ကြွေချင်တယ်.. တို...
အနုပညာဆိုတာ ကိုယ့်အတွက်တော့ အပြည့်အဝ လွတ်လပ်ရာ...
7 July (4)
Idea Magazine (9)
Myanmar Sar (5)
မြသီလာ ရဲ့ အဝေး (14)
kye Kye's Art
Htoo Myat's short stories
Htoo Myat's Design
မိုနေးသစ် ● သဘာဝကျကျ လမ်းများ
ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၈ )
အောင်ဆန်း (သို့မဟုတ်) အရိုင်း
မောင်စိန်သောင်းရဲ့ မနှင်းရည် နောက်ဆက်တွဲ
မေငြိမ်း ဝတ္ဌုတိုများ (၂၀၁၂)
အိပ်မက်တခုနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် (၁၉၉၄)
အဆိပ်ဖြင့်... မြက်ခင်းများဆီ (၁၉၉၁)
မုန်တိုင်းရဲ့ကျောရိုးနှင့် ချစ်သော ၀တ္ထုများ (၁၉၉၃)
မီးခိုးငွေ့ မီးခိုးမျှင် (၁၉၉၁)
ချစ်သူတို့ရဲ့ မနက်ဖြန် (၁၉၉၃)
Blog posts by May Nyane is licensed underaCreative Commons Attribution- Noncommercial- No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based onawork at maynyane.blogspot.com.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://maynyane.blogspot.com/.